के तपाइँको बच्चा बच्चा छ? गर्भावस्थामा संकेतहरू - PAMPEREDPEOPLENY.COM - गर्भावस्था-प्यारेन्टिंग
के तपाइँको बच्चा बच्चा छ? गर्भावस्थामा संकेतहरू
खेलकुद आईपीएल २०२१: २०१ bat नीलामीमा नदेखेपछि मेरो ब्याटि onमा काम गर्यो, हर्षल पटेल भन्छन्
समाचार शरद पवार २ दिनमा अस्पतालबाट डिस्चार्ज हुने छन्
चलचित्रहरू गुढी पाडवा २०२१: माधुरी दीक्षितले आफ्नो परिवारसँगै शुभ उत्सव मनाउने कुरा सम्झिन्
अटोमोबाईलहरू महिन्द्रा थार बुकिंगले Six०,००० माइलस्टोन केवल छ महिनामा पार गर्‍यो
घर गर्भावस्था प्यारेन्टिंग जन्मपूर्व प्रसवपूर्व oi-Denise द्वारा डेनिस ब्याप्टिस्ट | प्रकाशित: मंगलवार, फेब्रुअरी १,, २०१,, १ :3: [:3 [IST]
जब महिला गर्भवती छिन्, उनी प्राय: सोच्छिन् कि उनीसँग बच्चा छ वा केटी! सबै अभिभावकहरू जान्न उत्सुक हुन्छन् कि उनीहरूसँग बच्चा बच्चा वा केटी छ भने तिनीहरू आवश्यक तयारीहरू गर्न सक्छन् जस्तै नर्सरी सजाउने वा नाम लिने, आदि।
यदि तपाइँ पश्चिममा बस्दै हुनुहुन्छ भने, डाक्टरहरूले तपाइँलाई अल्ट्रासाउन्डको सहयोगमा केटा वा केटी बच्चा छिन भनेर बताउन सक्दछन्। दुःखको कुरा, भारतमा, विभिन्न कारणले गर्दा, केटाहरूको लागि क्रेज छ। र भारतमा यौन छनौट गर्भपातको गम्भीर समस्याका कारण, परीक्षणहरू जसले तपाईंलाई बच्चा जन्म दिन अघि लि the्ग बताउँदछन् अवैध छन्।
साइन इन तपाई एक बच्चा बेबी हो?
तर धेरै गर्भवती आमाले थाहा पाउन उत्सुक हुन्छन् कि सानो सानो बच्चा भित्र छ कि केटा वा केटी। धेरै व्यक्तिहरू, विशेष गरी पुरानो पुस्ताका, विश्वास गर्छन् कि गर्भावस्थाको अवधिमा संकेतहरू छन् जुन तपाईंलाई बताउँछ यदि तपाईं बच्चा बच्चा वा केटी हुनुहुन्छ भने। तर बच्चा लक्षण भएको गर्भावस्थामा यी लक्षणहरू वैज्ञानिक तथ्यहरू भन्दा पुरानो वाइफको कथाहरू हुन्। यी संकेतहरू मात्र गर्भावस्थाको पछिल्लो चरणहरूमा देख्न सकिन्छ, त्यसैले तिनीहरू द्वारा शोषण गर्ने कुनै खतरा छैन।
गर्भवती आमाहरूको लागि यो जान्न सधैं रोमाञ्चक हुन्छ कि उनीहरूसँग बच्चा बच्चा छ वा बच्चा छ भने। त्यसोभए, यदि तपाईं वास्तवमै तपाईंको पेटमा कस्तो बच्चा छ भनेर जान्न चाहनुहुन्छ भने, यी केटाहरू केटा संकेतहरू हुन् जसले तपाईंलाई नर्सरीको साथ तयार हुन मद्दत गर्न सक्छ वा चाँडै-आउने सानो बन्डलको लागि लुगा किन्नमा।
गर्भावस्थामा केटाकेटीले देखेका केही संकेतहरू हेर्नुहोस्।
गर्भावस्थामा बच्चाको स signs्केत गर्ने एउटा आम बच्चाको स्थिति हो। यदि तपाईं कम बोक्दै हुनुहुन्छ भने, यसको मतलब यो हो कि तपाईं बच्चा केटालाई बोक्दै हुनुहुन्छ।
मूत्र र Color्ग
त्यहाँ धेरै गर्भवती आइमाईहरू छन् जसले आफ्नो पेशाबको रंग जाँच गर्छन् उनीहरू पेशा पछि। यो विश्वास गरिन्छ यदि तपाईको मूत्र अँध्यारो छ भने, यसको मतलब केटा र बादल सेतो मतलब तपाईको केटी छ।
म कसरी बच्चाको प्राकृतिक रूपमा हिंदीमा कल्पना गर्न सक्छु
गर्भावस्थामा, हर्मोनहरूले विनाश खेल्छन्। जहाँसम्म, यदि तपाई नियमित पिम्पल्सको शुरुआत गरिरहनु भएको छ भने, यो एउटा बच्चा हो भन्ने तपाइँलाई संकेतहरू मध्ये एक मानिन्छ।
धेरै भारतीय महिलाहरूका अनुसार यो भनिन्छ कि यदि तपाईको गर्भवती पेट सानो छ भने तपाईले बच्चा जन्माउनुहुन्छ। यो एक सामान्य संकेत हो जुन तपाईं बच्चाको साथ गर्भवती हुनुहुन्छ भनेर देखाउनको लागि हो।
गर्भावस्थामा स्तनहरू ठूलो हुँदै जान्छन् किनकि यसले बच्चाको पालनपोषणको लागि तयारी गर्दछ। यो सही तथ्य हो कि बाँया स्तन दायाँ भन्दा ठूलो छ। तर, गर्भावस्थामा, तपाइँ एक बच्चा केटासँग गर्भवती भएको संकेतहरू मध्ये एक भनेको जब तपाइँको दाहिने स्तन देब्रेपट्टि भन्दा ठूलो हुन्छ।
यदि तपाइँको गर्भावस्थामा निरन्तर चिसो खुट्टाहरू छन् भने, यो तपाइँको बच्चा बच्चा भएको छ भनेर देखाउने संकेतहरू मध्ये एक हो।
जब तपाईं जाँच गर्न जानुहुन्छ, बच्चाको मुटुको दर याद गर्नुहोस्। यदि मुटुको दर प्रति मिनेट १ be० बिट्स भन्दा कम छ भने यो एउटा संकेत मानिन्छ जुन तपाईं बच्चाको साथ गर्भवती हुनुहुन्छ!
यदि तपाइँ बच्चाको साथ गर्भवती हुनुहुन्छ भने अर्को संकेत हो जब तपाईको कपाल सामान्य भन्दा छिटो बढ्न थाल्छ।
गर्भावस्था लालसा एक बच्चा हो कि तपाईं के बच्चा लेरहेको देखाउन संकेत हो। महिला जो बच्चा केटाहरूको लागि गर्भवती छन् उनीहरूलाई खट्टा खान वा नुनको खानाहरूका लागि तृष्णा हुन्छ।
गर्भावस्थामा, एक धेरै थकित महसुस गर्दछ। यद्यपि यो भनिन्छ कि जब कुनै गर्भवती महिला आफ्नो देब्रे छेउमा सुतिरहेकी हुन्छ, यो केटो बच्चा हो।
तपाईका हातहरू सुक्खा र क्र्याक भए के तपाईंले कति चिसो क्रीम प्रयोग गर्नुभयो? ठिक छ, यो एक संकेत हुन सक्छ जुन तपाईं बच्चा गर्भवती हुनुहुन्छ।
छालाको लागि दैनिक गाजरको रस पिउने फाइदाहरू
पातहरू सहित मेहँदी पेस्ट कसरी बनाउने
कच्चा चामल खाँदा सेतो डिस्चार्ज हुन्छ
हिंदीमा सर्व बधा मुक्ति मन्त्र
हस्तरेखा प्रेम विवाह लाइनहरु महिला हात